Ejipta: Fa iza i Mister Ejipta? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Jona 2010 19:11 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, عربي, македонски, 繁體中文, 简体中文, English
Tarek Mohammed Abdel Gawad, 26 taona, no voahosotra ho lehilahy tsara tarehy indrindra any Ajipta tamin'ity taona 2010 ity (Mister Ejipta 2010). Izy koa no solontenan'i Ejipta tamin'ny fifaninanana Mister World 2010 (lehilahy tsara indrindra maneran-tany 2010) natao tany Incheon, tany Korea, vao haingana.
Araka ny voalazan'ny Universal Queen:
Ny tena fanirian'i Tarek dia ny ho tonga mana-talenta amin'ny lamaody. Ny fialamboliny dia ny baolina kitra, ny volleyball ary ny sary hosodoko. “Aza mitomany amin'ny ronono very no teny fanevany azy manokana”.
Zeinobia milaza fa “moana” ilay tovolahy ary tsy mendrika hisolo tena an'i Ejipta:
Tsy misy zavatra hoteneniko afa-tsy ny hoe ohatry ny moana ilay tovolahy, tena moana. Mazava ho azy fa tsy manantena fahalalalana avo lenta amin'ny olona manaiky handray anjara amin'ny zavatra tahaka itony.
Ity sary mihetsika ity dia mandehandeha any amin'ny ejiptiana rehetra ao amin'ny facebook, izay nanehoan'ny maro ny heviny mikasika ny fomba fiainan'ireo pelaka.
Fa iza marina moa io tovolahy io?? Ary naninona no tsy nahare na inona na inona mikasika an'i Mr. Egypt 2010 tamin'ny fampahalalam-baovao!!?? Fantatro fa taorian'ny fanankianana nahazo ny Miss Egypt 2007, dia nanjavona Andriamatoa El Sibhay ary manontany tena aho hoe amin'ny fomba ahoana no nahafahany nikarakara zavatra tahaka izao sady nahazoany mpifaninana tahaka ny tany aloha!!??
Ao amin'ny Egypt Search Forum, sary mihetsika hafa no nalefan'i Tarek mpihira ny Get Down.
Fanehoan-kevitra ao amin'ny sehatra ady hevitra:
Mr Egypt – hmmm – tsy ratsy mihitsy.
Iriko ho ao aminy ny tsara indrindra!
Io ve ny Mr Egypt 2010…fahamenarana ho antsika lehilahy ejiptiana, misy foana ny fizahana tavan'olona na dia amin'ny fifaninanana hosoka tahaka izao aza.